မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Twilight (A Very good Movie)
Posted by mabaydar at 1:24 PM
"The Covenant" ပုံစံတူဇာတ်ကားပါ..
ဒီဇာတ်လမ်းမှာ မင်းသမီးက လူပါ.. မခုန်ပျံတတ်ပါဘူး.. မင်းသားပဲ ခုန်ပျံတတ်တာပါ..
မကြံကောင်း မစီရာဟယ်...။ လက်စသတ်တော့ နင်က အစုပ်ခံချင်နေတာကိုး...။ သွေး ... သွေး :P
That is very nice show. I love it too.
Just finish watching this movie... Nice... love it... I love the vampire family accept the human gal as part of their family and try to protect her to their best...
twilightကို အွန်လိုင်းမှာ ကြည့်ချင်ရင် အလွယ်တကူရအောင် လင့်ထားခဲ့တယ်နော်
မင်းသားကလဲ ဟယ်ရီပေါ်တာထဲက စက်ဒရစ်ဒစ်ဂိုရီစရိုက်နဲ့ တော်တော်ကွာသွားပြီ
ဗမ်ပိုင်ယာ မဗေဒါ ပေါ့လေ